Zavatra 8 ho hita sy atao any Amsterdam | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Amsterdam, tanàna, General, Pays-Bas
Amsterdam Tanàna maoderina be izy io, izay ahitanao toerana tsy manam-paharoa, ary tsy isalasalana fa iray amin'ireo fitsidihana mahaliana indrindra amin'ny tanàna eropeana iray izy io. Tsy hoe hahita ireo lakandrano malaza azy fotsiny isika, ka izay no antony iantsoana azy hoe Venise any Avaratra, fa hahita toerana malaza sy miavaka toa ny Distrika Jiro Mena na Coffee Shops ihany koa isika.
Raha izany no iray amin'ireo toerana efa niandrasanao dia izao no fotoana anaovanao a tanisao miaraka amin'ireo zavatra tsy maintsy ho hitanao ary ataovy rehefa tonga any Amsterdam ianao. Tsara hatrany ny manazava ny zavatra tiana ho hita araraotina amin'ny andro lanintsika any amin'ireo tanàna na toerana nofidintsika. Handeha hitsidika an'i Amsterdam ve isika?
1 Distrika jiro mena
3 Rijksmuseum any Amsterdam
4 Oude Kerk sy Nieuwe Kerk
7 voninkazo Market
8 Fivarotana kafe
Distrika jiro mena
Any Netherlands ny ara-dalàna ny fivarotan-tena nanomboka tamin'ny 1911, ary misy fomban-drazana iray izay ahitan'ny mpivaro-tena ao ambadiky ny varavarankelin'ny fivarotana ho toy ny fitakiana. Ity toerana ity dia tsy vitan'ny hoe lasa toerana fivahinianana masina ho an'ireo mitady orinasa, fa ho an'ireo mpizahatany manintona ny lazan'ny manodidina ihany koa sy ny mampiavaka azy manokana.
Ho hitantsika ny iray manontolo faritra feno jiro mena neon, mirehitra mazava Ny seho tsara indrindra dia tsy isalasalana fa amin'ny alina, rehefa mahita ireo varavarankely manaitra ny mpizahatany ireo ianao. Any amin'ny faritra manan-tantara ao an-tanàna izy io, ary ity dia iray amin'ireo varotra tranainy indrindra misy. Faritra misy fizahan-tany be dia be izy io ary azo antoka aza amin'ny alina.
Manana ny momba ny tanàna Lakandrano 75 kilometatra namakivaky tetezana an-jatony sy sambo kely maro an'isa. Ny lakandrano telo malaza indrindra dia ny Prinsengracht, ny Keizersgratch ary ny Herengracht. Io no toerana tsara indrindra hakana sary mahazatra an'i Amsterdam amoron-drano. Ankoatr'izay, azo atao ny manao dia an-tsambo amin'ireo lakandrano ireo, mahita ny tanàna amin'ny fomba hafa, miaraka amin'ny sakafo hariva na sakafo misy ao.
Rijksmuseum any Amsterdam
Io no tranombakoka lehibe eto an-tanàna, ary ao no ahitantsika ireo asa tsara indrindra amin'ilay antsoina hoe Zava-bolamena Holandey amin'ny kanto. Manana asa fito tapitrisa izy, noho izany tsy ho afaka ny hahita ny zava-drehetra, fa ny tsy tokony halainao dia ny sary hosodoko malaza tahaka ny 'Ny fiambenana alina' an'i Rembrandt na 'The milkmaid' avy amin'i Vermeer. Tranombakoka iray hafa izay tokony hitsidihanao raha any Amsterdam ianao dia ny tranombakoka Van Gogh misy sanganasa maherin'ny 200 an'ny hosodoko holandey malaza.
Oude Kerk sy Nieuwe Kerk
Izany hoe fiangonana taloha sy fiangonana vaovao. ny Ny fiangonana taloha dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary io no trano tranainy indrindra eto an-tanàna. Any amin'ny faritry ny Distrika Jiro Mena no ahazoanao manararaotra izao fitsidihana izao. Ao anatiny dia misongadina ireo varavarankely fitaratra miloko tsara tarehy sy ilay taova lehibe. Ny fiangonana vaovao dia ao amin'ny Dam Square, eo afovoan-tanàna amin'ny faritra manan-tantara. Trano taonjato faha-XNUMX mahafinaritra izy, na dia ao anatiny aza tsy dia manaitra sy tsara tarehy kokoa noho ny Fiangonana taloha.
Raha efa namaky ny boky ao amin'ny 'Diary of Anne Frank' Ary tena tianao be io toa ahy, ka tsy azonao adino ny fitsidihana ny trano Anne Frank, izay navadika ho tranombakoka ho fanomezam-boninahitra azy izao. Io no trano nierenany niaraka tamin'ny fianakaviany mba hialana amin'ny fanenjehana nazia, na dia roa taona aza no nahitana azy ireo ary nalefa tany amin'ny toby fitanana, maty tany izy, ary ny dadan'i Ana sisa velona. izy ireo dia mitantara izay nitranga tao amin'ny efi-trano tsirairay mba hahafantaranay tsara izay zavatra hitantsika sy ny toerana niafenan'izy ireo.
Ny kianja dia tena manandanja tokoa amin'ity tanàna ity, izay misy ny ivon'ny hetsika rehetra, noho izany dia ilaina izany raha te-hahita ny faritra be olona sy mahaliana indrindra ao an-tanàna isika. ny Kianjan'ny tohodrano Io no zava-dehibe indrindra eto an-tanàna, miaraka amin'ny Royal Palace sy ny New Church. Ao amin'ny Leidseplein dia hahita toerana feno sarimiaina, misy bar, trano fisakafoanana, fampisehoana an-dalambe, sinema ary teatra. Ao amin'ny kianjan'i Spiu no ahitantsika toerana mifanohitra, mangina tanteraka, ahafahantsika misotro kafe nefa tsy maika.
Izany no fantatra Tsenan'ny voninkazo, toerana mety indrindra ho an'ireo tia zaridaina. Ary na dia tsy fialam-boly tianao indrindra aza izany, dia toerana tena tsara tarehy ahitanao ny tulipa misy loko rehetra, voninkazo tsy misy farany, voa ary indrindra habaka feno loko misaotra ireo voninkazo.
Mifarana amin'ny iray amin'ireo zavatra ataon'ny mpizahatany maro isika rehefa mankany Amsterdam, dia ny fitsidihana ny Coffee Shops. Izy ireo dia toerana misy ny fampiasana rongony sy zavatra hafa avela. Tokony hotadidinao fa ivelan'izy ireo dia tsy ara-dalàna. Na izany na tsy izany dia miha hentitra hatrany ny lalàna hampitsahatra ity karazana fizahan-tany ity, ka maro amin'izy ireo no manjavona. Mila mandeha an-tongotra hijery ireo toerana niavaka ireo, indrindra alohan'ny hahavitan'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Amsterdam » Zavatra 8 ho hita sy hatao any Amsterdam